Virtualization - Teknụzụ dị maka 2019 | Site na Linux
The Virtualization nke Sistemụ arụmọrụ (OS) nwere isi ihe mejupụtara inwe ike ịkekọrịta n'otu Akụrụngwa ahụ ọtụtụ sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ n'ụzọ kwụụrụ onwe ya. Emere nke a site na iji sọftụwia izizi, nke enwere ọtụtụ na kọmpụta kọmputa ma nwee ọtụtụ ihe ndị ọzọ na - akwụghị ụgwọ na nke ọzọ.
Teknụzụ niile dị ugbu a nwere ọkwa dị iche iche nke nsogbu banyere ntinye ha, nhazi, ojiji na nnweta na nnweta nke akwụkwọ dị mkpa iji mara ya. Ma ihe niile na-elekwasị anya na ikwado na May ma ọ bụ obere njedebe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ OS ọ bụla (ọbịa) ma ọ bụ OS (onye ọbịa), iji nwee ike nwalee OS ọ bụla na-enweghị ịnwe draịvụ ike raara onwe ya nye.
1 Mkpa nke Virtualization
2 Uru nke Virtualization
3 Kọ ihe ụfọdụ nke Virtualization
4 Teknụzụ Virtualization
Mkpa nke Virtualization
Ma na-eme ka OS zuru ezu ma ọ bụ naanị 1 ma ọ bụ ọtụtụ ngwa, ịba uru bụ ihe dị mkpa ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ịgbasawanye ohere anyị na ike anyị n'ime ikpo okwu anyị ugbu a (kọmputa / netwọk).
Maka ndị niile na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-enwe ọ Technologyụ na Teknụzụ, ọ dị ezigbo mkpa ka ọ bụrụ na ị gbasoro mgbanwe ndị mere na ya., ma ọ bụ iji bulie mmepe ọkachamara anyị, melite ọrụ anyị ma ọ bụ naanị ịkwado mmụta na / ma ọ bụ nkuzi nke ọhụụ na sayensị kọmputa.
Onye na-anụ kọmputa, na-abụkarị onye ọrụ ụlọ nke na-eji ụfọdụ OS eme ihe na-achọ ịmụta iji ma ọ bụ jiri uru nke OS ọzọ amaara ama ma ọ bụ na-enweghị, na-enweghị ịhazi usoro kọmputa gị.
Teknụzụ ndị na-eme ka nke a kwe omume bụ Virtualization nke sistemụ arụmọrụ, nke nwere ihu ọma nwere ike ịkekọrịta na otu HW ọtụtụ sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke.
Teknụzụ HW dị ugbu a emeela ka teknụzụ a mepụta ọtụtụ, ya bụ, ngwa ndị na-akwado ya, nke taa na-enye anyị ohere iji rụọ ọrụ otu ma ọ bụ karịa sistemụ arụmọrụ ss dị iche na nke anyị na nke anyị, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ezigbo ike ma mgbe ụfọdụ ọ hà ma ọ bụ karịa karịa ma ọ bụrụ na arụnyere ya ozugbo na HW anyị.
Uru nke Virtualization
Chekwaa mmefu maka ụgwọ nke akụrụngwa ọhụụ.
Ibelata Mmekọrịta Mmemme Mmemme
Chekwa awa / ọrụ site na Cloning nke sistemụ ọkụ.
Chekwa awa / oru site na Mbugharị nke sistemụ ọkụ
Mfe nke mmejuputa iwu nke Ule
Melite iche nke akụrụngwa, Ngwa na Ọrụ
Meziwanye Nche na Profaili nke ịnweta ụfọdụ site na akụrụngwa na sistemụ
Ime mgbanwe na ịdị gara gara iji weghachi akụrụngwa, Ngwa yana Ọrụ.
Kọ ihe ụfọdụ nke Virtualization
Ekwe omume ala ala
Ikekwe ngwe ngwaike
Ọrụ bara ụba n'ihi mmụba nke MV
Nnukwu ihe ize ndụ n'ihi mkpokọta nke MV
Ihe ize ndụ nke enweghị ịdị n'otu ma ọ bụ enweghị nhazi nke usoro VM
Teknụzụ ndị dị na ntanetị nwere ihe a maara dị ka "Hypervisor" ma ọ bụ "Virtual Machine Monitor (VMM)", nke bụ ihe ọ bụla karịa Virtualization Platform n'onwe ya, ya bụ, teknụzụ nke na-enye anyị ohere iji, n'otu oge ahụ, otutu OSs na onye ọbịa nnabata (nkịtị Server).
Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịkọwa Hypervisors n'ụdị abụọ:
Pịnye 1 (Nwa afọ, Obodo efu): Ndị a Hypervisors bụ ngwanrọ ngwanrọ ewepụtara ozugbo na ezigbo HW nke onye ọbịa ọbịa (ihe nkesa anụ ahụ) iji chịkwaa HW ma nyochaa ọtụtụ OS dị ọcha. Usoro Virtualized na-arụ ọrụ na ọkwa ọzọ n'elu Hypervisor.
Offọdụ ndị maara nke ọma Typedị 1 Hypervisors bụ ndị a:
Microsoft Hyper-V nkesa
VMware: ESX / ESXi / ESXi efu / vSphere Hypervisor
Ndị Hypervisors nke ụdị 1 n'otu n'otu nwere ike ịbụ ụdị abụọ:
Site na Microkernel
Pịnye 2 (Nọrọ): Ndị a Hypervisors bụ ngwanrọ ngwanrọ nke na-agba ọsọ na OS (Linux, Windows, Mac OS) iji mee ka ndị ọzọ sistemụ arụmọrụ. N'ụzọ dị otú a, ịmalite ịdị na-eme na oyi akwa ọzọ site na HW ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere Hydị Hypervisors 1. N'ụzọ ezi uche dị na ya, nke a na-eme ka arụmọrụ ahụ belata na 2dị XNUMX Hypervisors.
Offọdụ n'ime ihe ndị kachasị mee Typedị 2 Hypervisors bụ ihe ndị a:
Kernel dabeere Virtual Machine (KVM)
VMware: Ebe ọrụ, Server, Player na Fusion
Microsoft: PC mebere, sava mebere
Tebụl na-arụ ọrụ
Red okpu Enterprise Virtualization
Hypervisor nke Virtuozzo
A na-ekwukarị na ngwakọ ngwakọ na ụfọdụ akwụkwọ, nke, dị ka aha ya na-ekwu, mejupụtara mmejuputa ụdị 2 nke Operating Systems Virtualization nke a kpọtụrụ aha n'elu n'ime otu onye ọbịa ahụ. Teknụzụ ndị ọzọ amaara ama nke ọma ekwuru bụ ndị metụtara igwe ojii ma ọ bụ Containers. N'ime ndị a bụ:
Virgwé ojii Virtualization
Ọrụ Ntanetị Amazon (AWS)
Ihe Nchekwa Windows
Ikpebi ụdị Virtualization teknụzụ kachasị mma dabere na mkpa na usoro azụmaahịa nke nzukọ yana ikike ndị ọrụ IT na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ma na nchịkọta ọ nwere ike iburu n'uche na ụdị hypervisor nke 1 dị ngwa karịa ụdị hypervisor 2, ebe onye mbụ na-agwa HW ihe nkesa ozugbo. Typedị Hypervisor nke Typedị 1 anaghị arụ ọrụ na OS yana ọtụtụ ọkwa na -ebelata ikike nke ndị nlekọta Hypervisors.
Na-ekwubi na site na ụdị Hypervisor 1 anyị ga-enweta arụmọrụ ka mma, scalability na nkwụsi ike. Mana, na ntụle, anyị nwere nke a na ụdị ụdị teknụzụ a na-akwado HW nwere oke oke ebe ọ bụ na a na-ewukarị ya na ndị ọkwọ ụgbọala pere mpe yana mmejuputa ya dị mgbagwoju anya.
Mgbe gị na 2dị XNUMX Hypervisors ndị ọzọ na-ewu ewu ma mara onye ọ bụla ma mee ka usoro izi ihe dị ngwa ị ga-esi nweta ndakọrịta. ebe ha nwere matriks HW sara mbara, ebe ha na-eji usoro eji eme ihe ngwanrọ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike itinye Hypervisor Typedị 2 na laptọọpụ dị mfe karịa Hypervisor Type 1. Ọzọkwa, Hypervisors Typedị 2 dị mfe ịhazi ka ha na OS na-arụ ọrụ ozugbo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Virtualization: Teknụzụ dịnụ maka 2019
Septor nke dabeere na Debian gbadoro anya na nzuzo
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Metasploit Framework 5.0